MUUQAAL-Wasiirka Caafimaadka “Dhaawacyada aan dalka wax looga qaban karin caafimaad dibadda ah ayaan u qaadeynaa” – Radio Muqdisho
MUUQAAL-Wasiirka Caafimaadka “Dhaawacyada aan dalka wax looga qaban karin caafimaad dibadda ah ayaan u qaadeynaa”
Wasiirka caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Xaawo Maxamed Xasan oo maanta booqatay dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qarixii argagixisanimo ee shalay ka dhacay Muqdisho ayaa sheegtay in dhaawacyada gudaha dalka aan wax looga qaban karin loo qaadi doono caafimaad dibadda ah.
Wasiirka Caafimaadka iyo xubnaha la socday ayaa ujeedka booqashadooda la xiriirtay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen xaaladda caafimaad dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxii Central Hotel ee degmada Xamarweyne, waxaana ay tegeen Isbitaallada Daaru-shifa, Recep Tayyip Erdoğan iyo Madiina oo ay ku jiraan dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii shalay, iyadoo warbixinno ka dhageysatay mas’uuliyiinta isbitaalada ay booqatay.
Mas’uuliyiinta ayaa waxa ay mid mid u gacan qaadeen bukaanada, iyagoo xog wareysi la yeeshay, si kuwa aan dalka wax looga qaban karin caafimaad dibada ah loogu qaado.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Xaamo Maxamed Xasan oo la hadashay booqashada kaddib Warbaahinta Qaranka ayaa ugu horeyn ka tacsiyadeysay dadkii shalay ku dhintay qaraxii ka dhacay Muqdisho, iyadoo kuwa dhaawac ahna Alle uga bariday in uu bogsiiyo.
“Maanta waxaan soo booqanay dhaawacyadii shalay oo la geeyay ilaa iyo saddex isbitaal, waxaan aragnay kuwa dhaawacyo fudud iyo kuwa kale oo daran oo u baahan in caafimaad dibadda ah in loo qaado, marka waxaan qorsheynaynaa in aan dibadda u qaadno ilaa iyo 10 qof oo xaaladooda aan halkan wax looga qaban karin, booqashadeenuna waan joogteyneynaa si aan u ogaano haddii ay jiraan kuwa kale oo u baahan caafimaad dibada ah”. ayay tiri Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka.